Ciidan ilaalinayo UN oo Muqdisho gaaray - BBC News Somali
Ciidan ilaalinayo UN oo Muqdisho gaaray
Image caption Ciidammada Uganda oo ilaalinayo xarumaha Qaramada Midoobay ee Muqdisho gaaray.
Ugu yaraan 60 askari oo ka socda dalka Uganda oo qayb ka ah afar boqol oo askari oo loogu talagalay inay ilaaliyaan xarumaha Qaramada Midoobay ayaa maanta ka dagay garoonka magaalada Muqdisho.
Ciidankan ayaa xirnaa koofiyadaha bulugga ah waxaana garoonka Muqdisho keentay diyaarad gaar ah .
Waxaana ay u gudbeen xarunta ugu wayn ciidamada Midowga Afrika ee Xalane ee magaalada Muqdisho.
Xarumaha Qaramada Midoobay ee magaalada Muqdisho ayaa dhowr jeer la weeraray iyadoo weerarkii ugu waynaa sanadkii hore bishii June lagu qaaday dhismaha wayn ee ku dhaw garoonka diyaaradaha halkaas oo ay ku dhinteen 22 ruux.
Isla sanadkan billowgisii waxaa meel ku dhaw garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu weeraray kolonyo ay la socdeen shaqaale ka tirsan hay'adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR, taas oo sii kordhisay walaaca xagga amniga ee shaqaalaha iyo xarumaha Qaramada Midoobay.
Ciidamadan Uganda ayaa ku shaqeyn doono sharciyada ciidamada nabad illaalinta ee Qaramada Midoobay, waxaana shaqadoodu noqon doontaa illaalinta xarumaha iyo shaqaalaha QM ee Soomaaliya ka shaqeynaya gaar ahaan magaalada Muqdisho.
AMISOM oo la wareegtay Ceelbuur